UserTesting: On-Demand Yevanhu Ruzivo rwekuvandudza Iyo Yevatengi Chiitiko | Martech Zone
Embed HTML haisi kuwanikwa.
Kushambadzira kwemazuva ano ndezve mutengi. Kuti ubudirire mumusika wevatengi-centric, makambani anofanirwa kutarisa pane chiitiko; ivo vanofanirwa kunzwira tsitsi uye nekuteerera kune vatengi mhinduro kuti varambe vachivandudza zviitiko zvavanogadzira uye zvavanounza. Makambani anogamuchira ruzivo rwevanhu uye vanowana mhinduro yehunhu kubva kune vatengi vavo (uye kwete kungoongorora data) vanokwanisa kuwirirana zvirinani nekubatana nevatengi vavo nevatengi munzira dzinonzwisisika.
Kuunganidza ruzivo rwevanhu zvakafanana nekuzviisa iwe mushangu yevatengi vako kuti vadzidze, vanzwisise uye vashanduke nezvavanoda. Nenjere dzevanhu, makambani anokwanisa kutora huchenjeri hunodiwa kuti usvike mutengi munzira nyowani, dzekuvandudza, uye dzinoshanda dzinogona kukanganisa mari, kuchengetedza, uye kuvimbika.
UserTesting: Chigadzirwa Ongororo
Zviitiko zvakashata pamawebhusaiti nemaapp, uye mune chaiko nyika, hazvisi kungogumbura vatengi, ivo vari kudhurira makambani mamirioni emadhora pagore. UserTesting zvinoita kuti zvive nyore kumasangano kuwana mhinduro-pane-inoda kubva kumisika yavo yavanotarisira-chero kwavanenge vari. Iine UserTesting's pane-inoda chikuva, masangano anogona kufumura 'nei' kumashure kwekudyidzana kwevatengi. Nokunzwisisa chinangwa, mabhizinesi anogona kuvandudza uye nekupa zvinoshamisa zviitiko, kuchengetedza iyo mhando, uye kutyaira kukuru kugutsikana kwevatengi. Nayo UserTesting chikuva, mabhizinesi anogona:
chipfuro- Tsvaga uye ubatanidze nevateereri chaivo vanodiwa, pasina kuedza, marefu macircuit kana mutengo unobatana nekutora vanhu nemaoko kuti vape mhinduro.
Tsvaga vatengi uye nyanzvi dzebhizinesi kubva pasirese pasire pane-kudiwa neakakura, akasiyana siyana akasimbiswa mapaneru evadzidzi vechikamu.
Tinya kune vatengi, vashandi, uye vanobatirana kuburikidza neemail, zvemagariro midhiya kana dzimwe nzira.
Hone mukati mevanhu chaivo, uchishandisa mafirita kugona, senge nzvimbo, huwandu hwevanhu, uye magariro ehupfumi.
Batanidza nehunyanzvi vateereri uye zvakaoma kusvika pamapaneru nerubatsiro rwechikwata chedu chehunyanzvi.
Ita shuwa kuti iwe unogamuchira yemhando yepamusoro mhinduro kuti uzivise yako CX kuyedza neAtestTesting yakasimbiswa uye yakaongororwa yekutanga bato revatengi uye bhizinesi nyanzvi pani.
Batanidzwa- Sarudza mhando yemayedzo anozopa zvinonyanya kukosha, zviito zvinoitika pasina matambudziko ekutonga kana kudiwa kwehunyanzvi hwekutsvagisa.
Tora mhinduro mune mashoma semaawa maviri nemaawa maviri uchishandisa matemplate, otomatiki kutora, uye maficha ekuyedza chero chiitiko.
Tora mhinduro pane chero chinhu, senge desktop, nharembozha, kana zviitiko zvemberi, uye zvigadzirwa pane chero danho rekuvandudza.
Kugadziridza kuri nyore kuti chero munhu ari kuchikwata chako agadzire ehupenyu kana akarekodhwa zvidzidzo zvepurojekiti yega yega, chero nguva.
Mhedzisiro mukati memaawa anoreva kuti iwe unogona kuyedza chero chinhu chaunoda kuti mutengi anzwisise, kubvisa fungidziro kuseri kwebhizimusi rako rekudyara - ingave izvo zvigadzirwa zvigadzirwa, dhizaini dhizaini, kushambadzira mameseji, mifananidzo yemushandirapamwe, kopi yewebhu.
Shanda nenyanzvi dzedu kana iwe uchida rubatsiro mukugadzira zvimwe zvidzidzo zvakaoma.
Kunzwisisa- Tora uye utarise zvine mutsindo maitiro uye mhinduro, wobva wakurisa musangano rese kuti uwedzere kubatana pamwe nekubvumirana.
Nezvese zvevatengi zvekunzwisisa munzvimbo imwechete, kukurumidza kuongorora kunogoneka nekukwevera kubva kuzere izere data.
Bvisa uye simbisa yakakosha yevatengi njere kutyaira kubvumirana pane chaipo sarudzo uye anotevera matanho.
Kugovera kugona kunoita kuti zvive nyore kuyananisa zviwanikwa mukati mesangano rese.
Tora-kutenga kubva kune vane chekuita nekuburitsa pachena, husingarambiki humbowo nezve izvo zvinoda vatengi, zvavanoda uye zvavanotarisira.
UserTesting: Mashandiro Ainoita
UserTesting: Key Zvimiro
UserTesting inoramba ichiwedzera iyo nzwisiso yemunhu chikuva uye ndawedzera chitsva template gallery, zvinobvumidzwa kuyerera maficha, kuyedza kwemuti, kusangana pamwe neQualtrics XM Platform, uye smart tags.
Pair analytics uye vhidhiyo mhinduro kuti unzwisise "nei" kumashure kwevatengi zvinotarisirwa
Sanganisa yavo Qualtrics XM chikuva kuti iwedzere ruzivo rwekuongorora nehunhu hwehunhu, kuunza hukuru hukuru kune "nei" kumashure kwesarudzo mhedzisiro.
Regedzera muchina kudzidza kukurumidza kuburitsa yakanyanya kukosha nguva yevatengi
Shandisa akachenjera mamaki kuti uwane uye unzwisise akakosha nguva mukati mevhidhiyo mhinduro chikamu
Tora mukana wemuchina wekudzidza modhi kuti uongorore vhidhiyo mhinduro uye ongororo mune chaiyo-nguva.
UserTesting My Recruit - MyRecruit inopa masimba kumakambani kuti vapinze mukati mevatengi vavo, mushandi uye dhatabhesi reshamwari kuti vaunganidze ruzivo uye mhinduro Mukuongorora zviitiko zvevateereri vekare, makambani anogona kuve nechokwadi chekuti vari kutsvaga zvido zvebhizimusi zvisiri kuzadzikiswa parizvino.
NaYangu Kubatira, iwe unogona:
Unganidza pane-zvinoda, zvinogadziriswa, mhinduro kubva kune varipo vatengi, maindasitiri nyanzvi, uye zvimwe.
Wana nzwisiso kunyangwe nekukurumidza pamwe nekuzviongorora-kuzviitira basa nevateereri vane tarisiro yakanyanya.
Bata vashandi uye gadzira mufaro pamusoro pechako uye zvigadzirwa.
UserTesting Live Kukurukurirana - Rarama Kurukurirano inopa yepamhepo, moderated bvunzurudzo iyo inoteedzerwa yakanyorwa uye yakadhindwa kuti ive nechokwadi chekuti zvese zvidzidzo zvinotorwa uye zvinogoverwa pasangano rese. Kurarama Kukurukurirana kunogonesa rimwe-zuva, 1: 1 inofambidzana hurukuro dzevatengi uye inotsigira izwi rezviitiko zvevatengi. Vabvunzi vanokwanisa kufunga zvisiri zvemashoko, zvakaita sekumeso kumeso uye matauriro ezwi kuti vanzwisise zvirinani nemushandisi - uye vanogona kukurumidza kutungamira kana kutungamira nhaurirano yekukanda mumisoro yakati kana kuwedzera kunzwisisa maonero evatengi. NeKurarama Kukurukurirana, vatori vechikamu vanopihwa mukana wekupa yakawanda mamiriro kumibvunzo, kugovana pakatarisana nezvinetso, uye nekupa iyo kambani mazano ekuvandudza.
Kutsva-kwechitatu-bato kunoratidza kuti mu-munhu anotarisa mapoka anogona kuve nematambudziko mazhinji. Pakati peiyi pane kubatanidzwa kwenguva, kunetsekana kuendesa vanokodzera testers, groupthink, uye kudhura uye sampling kusarura. UserTesting inoderedza zvipingamupinyi izvi nekuitisa ongororo yemushandisi (moderated kana unmoderated), kukumbira mhinduro yevatengi uye / kana kupa 1: 1 kubvunzurudza kuri nyore, kusingadhuri, kuri kudiwa uye chaiyo-nguva.
Iko Kukosha Kwebhizinesi kweKuru Kwevatengi Zvakaitika
Maererano ne Forrester, 73 muzana yemakambani anoona ruzivo rwevatengi seyakanyanya kukoshesa, asi imwechete chete muzana yemakambani inounza chiitiko chakanakisa - asi kana iwe uchida kuti vatengi vako vagare vakavimbika unofanirwa kuzvipira kuvaka pane chiitiko. Kuti uite zvine mutsindo wepasi pemari yemari, iwe unofanirwa kubata nekudyara mune ruzivo rwevatengi uye kukumbundira kuenderera mberi nekudzidza uye kuwanikwa kuti ugare uchidzokorora uye kugadzirisa pane chiitiko chaunopa kune mushandisi wekupedzisira. Nhasi, hutungamiriri hwepamusika uye makwikwi kusiyanisa kuri kuwedzera kusarudza kuti ndiani anopa akanakisa mutengi ruzivo. Makambani anoisa mari muCX anobatsirwa nekugadziriswa kwevatengi, kugutsikana kwevatengi uye kuwedzerwa kwekutengesa-kutengesa uye mikana yekuwedzera
Isu tave panguva iyo apo ruzivo rwevatengi rwakakosha kune yepazasi mutsara wekambani. Vatengi vanogadzira chiitiko chakanaka kubva pane izvo zvavanofungidzira chiitiko chakanaka kuve; hazvibvi pane zvakaitika kwavari munguva yakapfuura. Nekuda kweizvi, zvakakosha kupa makambani ruzivo rwavanoda kuti varambe vachivandudza kusangana nezvinotarisirwa nevatengi.
Andy MacMillan, CEO weMushandisiTesting
Saina Kumusoro kweMushandisiKuedza Mahara Muedzo
Tags: Andy MacMillanvatengi vanozivavatengi ruzivo ruzivocxEnterprisemhinduro maturusimagadzirirwo emunhuIntercontinental Hoteli Bokararama hurukuroMicrosoftmobile app kuongororanharembozha appmobile app kuyedzawandinoshandirachigadzirwa utsanziUnhu hweXMsaiti mhinduroyokuedzwamushandisi kuyedzausertestingizwi remutengiwalmart canada
Maitiro Ekumisikidza Yako PowerPoint Slide Ratidza Mune Imwe Imwe Hwindo yeVirtual Zviitiko